जलवायु प्रदर्शन कार्यक्रमहरू हगले साबित गरेका छन्: मार्टिन भिजल्याण्ड
ठीक छ, तपाईले 5500 विद्यार्थीहरूलाई कानूनी रूपमा खेल ह्यागमा प्रदर्शन सुरु गर्न उत्प्रेरित गर्न दिनुहोस्। यसको लागि तिनीहरू विद्यालयमा एक फारममा हात लगाउँछन् र उनीहरूको आमाबाबुबाट अनुमति माग्नु पर्छ। यी केटाकेटी सामान्यतया सजाय बिन्दुहरू पाउँछन् जब उनी स्कूलबाट टाढा खेल्छन्। यसको मतलब के हो? त्यो पछि यसको संगठन छ। देखाउन र साथ (ribald) (तल Geenstijl भिडियो बाट देखेको रूपमा) तिनीहरूले नै समझ छैन भनेर गीत गत्ता संकेत भन्दा कुराकानी गर्न हेगुइ आउन तपाईंले तिनीहरूलाई कल। यसको मतलब के हो? त्यो पछि यसको संगठन छ। त्यसोभए राज्यले आफैले यस्तो प्रदर्शन गरेको मान हो? केहि पनि छैन। यो मुख्य रूप देखाउँछ कसरी प्रदर्शन सधैं संगठित हुन र छोराछोरीलाई 5500 Inofizieller स्टाफ तिनीहरूले के विचार नगर्ने, तर तिनीहरूले एक कण लागि विनिमय मा भन्नुभयो छन् के बस nablaten को अर्को पुस्ता।
बच्चाहरु जसले कुनै पनि जुत्ता बिना वातावरणको बारेमा केहि भन्न, विशेष गरी सायद हाम्रो समाज संग कति दुःखलाग्दो छ। जलवायु मा सम्पूर्ण बहस टिभी मार्फत सम्पूर्ण शो हेगुइ मा अभिनेता र धारणा व्यवस्थापन जस्तै दुःखी भन्दा बढी केही छ शर्मिंदगी छ। मान्छे तर साँच्चै रुचि के र कसैले साँच्चै केही, लामो रूपमा बिदाको कल तर भुक्तानी गर्न सकिन्छ, तर सप्ताह revelry र 'सरकार' तर सबै नियन्त्रण फेरि भरिएको छ। औसत अमेरिकी को स्तर टेलीग्राफ र Geenstijl कि, छ कैफे Weltschmerz, को Volkskrant र Trouw मा एक चोटी संग। राय तोता मंत्र हो र ज्ञान टीवी वा अन्य अस्थिर स्रोतबाट आउँछ। हामी धेरै व्यस्त छौं र काम पछि भाप उड्दै छौं।
CO2 रूपहरु को केवल एक सानो प्रतिशत को रूप मा र ओक्सीजन मा रूखहरु द्वारा परिवर्तित गरिन्छ। CO2 वातावरण मा एक आवश्यक पदार्थ हो। मानव प्रदूषण को योगदान धेरै सानो छ कि हामी वास्तव मा बिजुली कारहरु लाई चलाएर बदल नहीं गर्छन। के कसैले कच्चे माल खसाल्दा यी बिजुली कारहरुमा यी ब्याट्रीहरु को निर्माण को कारण प्रदूषण देखेको छ? ग्लोबल वार्मिङको लागि वैज्ञानिक प्रमाणहरू एक वैज्ञानिक एक पोडियम दिने र अन्य व्यक्तिलाई इस्तीफा दिने देवीलाई तान्न सकिन्छ। वातावरण मा CO2 को प्रतिशत मुख्यतः सौर गतिविधि को परिणाम हो, यसैले पनि उपेक्षित (हेर्नुहोस यो प्रस्तुति)। त्यसोभए, हामी अमेजनमा पूरै बगैंचाहरू काट्न जारी राख्दछौं किनभने हामीलाई धेरै काठ चाहिन्छ। त्यो पेडहरू CO2 लाई अक्सिजनमा रूपान्तरित गर्नाले पनि तल भिडियोमा औसत विद्यार्थीलाई थाहा छैन। यदि "सरकार" ले मात्र व्यवस्थित गर्छ कि हामीले बढी कर तिर्न पर्छ, त्यसपछि सबै कुरा ठीक हुनेछ। र यो वास्तवमा यो के हो कि: पैसा बनाउन मिसिन। थप पढ्नुहोस् ..
ब्लूमबर्ग रिपोर्ट गरियो 23 अक्टोबर 2018 निम्न:
उद्योग दर्शकहरूले अब ब्याट्री उत्पादनदेखि डराउँछन्, जबसम्म यो नाटकीय रूपमा परिवर्तन हुन्छ, साथै विद्युतीय उत्पादन वास्तवमा उत्पादन हुनेछ अझ बढी वायुमंडलीय प्रदूषकहरू सबैभन्दा कुशल ग्याँस र डीजल इन्जिन भन्दा बढी यस समय गर यो विचारधारा गर्न एक सरल परिस्थिति हो, एक उच्चतर नेताहरू वा विद्युतीय कार निर्माताहरूले प्राय: उल्लेख गरेन।
अझै, EVs मा धेरै फाइदाहरू हुनेछ जुन हाइपर-प्रदूषित शहरहरूमा जस्तै बीजिंग भइरहेको पनि महसुस गरिनेछ ब्याट्री उत्पादन स्व-फाइनल प्रदूषण को मात्रा बढ्छ वातावरणमा जाँदैछ। यसैले त्यस्ता शहरहरू, स्थानीय वातावरणमा वायु प्रदूषणको फाइदाहरूको जवाफ दिईनेछ र अन्य वातावरण वायु प्रदुषण गर्दा अन्य ठाउँमा। यो विचार गर्न एक अजीब व्यापारओफ हो, तर शहरी वायु क्लीनरमा योगदान गर्ने ईवीले स्थानीय तहमा बच्चा वा म्यानपार्ट उत्पादन गर्न सक्छ, जस्तै कि कोइला मा चलिरहेको फ्याक्ट्रीहरूले ब्याट्री उत्पादन गर्छन्। र अधिक प्रदूषण.
अभिनेता संघ हेगुइ को दृश्य मा FVD Thierry Baudet रूपमा नियन्त्रित विरोध दल, एक सानो लड्न दिन सक्छ। यसले आलोचकहरूको लागि सुरक्षा नेटको रूपमा सेवा गर्दछ। यसको उद्देश्य हामीले निगेल फराज र तिनको यूकेआईआईपी पार्टी ब्रेक्सिट चाहिएको जस्तो देखिन्छ। तपाईंले तिनीहरूलाई निम्न यहाँ जीत गरौं र त्यसपछि तपाईं सूप मा सम्पूर्ण प्रक्रिया गरौं र तपाईं ती troublemakers संग व्यवहार गर्नुभयो छन्। निगेल Farage को भूमिका Thierry Baudet को कि रहिरहन्छ जस्तै थियो: बोर्ड मा महत्वपूर्ण thinkers पुल र तपाईं फेरि डूब सबै पानी बाहिर माछा त सही समयमा डूब नियन्त्रण जहाज छोडेर देखाउन सक्छौं तिनीहरूले यद्यपि त्यस कठिनाइको प्रतिरोध रोक्न।
स्रोत लिङ्क सूची: autoweek.com
डोनाल्ड टस्क "मलाई आश्चर्य छ कि नरक मा विशेष स्थान ब्रेक्सित पदोन्नति गर्नेहरुको लागि जस्तो देखिन्छ"
हाम्रो देश इन्फनिजियेल मित्तैब्रेटरसँग फट्याउँदैछ (जस्तै यो यसलाई पूर्व जीडीआर मा स्टेसी अन्तर्गत भनिन्छ)
ब्लक फ्रेजिशियन, विरोधी-पाइट सक्रियता र राजनीतिक खेल
ट्याग: 5500, तस्वीर, CO2, प्रदर्शन, डेनहाग, विशेष, कुनै शैली छैन, वातावरण, जलवायु सम्झौता, Malieveld, विरोध मार्च, विद्यार्थीहरू, truant, भिडियो
8 फरवरी 2019 मा 10: 55
यो दुखी र अजीब दुवै को लागी कि विद्यार्थी आफैले, साथसाथै वयस्कों द्वारा संकेतहरू देख्न दुखी छ। यो मेरो लागि स्पष्ट छ कि यो पहिले नै व्यवस्थित गरिएको छ जुन ग्रंथहरू एक (वा हुनुपर्छ) गन्तव्य चिन्हमा लेख्न सक्दछ। फन्टहरू प्रयोग वा जो राजधानी अक्षर, सानो र ठूलो अक्षर interchangeably प्रयोग गरिन्छ संग, आफूलाई धेरै लगातार ब्लक अक्षरहरू प्रयोग गर्न वा संकेत गरिन्छ (र त्यसपछि पटक-पटक) छोराछोरीलाई द्वारा वयस्क गरेको छन् संकेत धोका।
संयोगमा, धेरै वयस्कहरूले ब्लक अक्षरहरू, साना अक्षरहरू र ठूला अक्षरहरू पनि मिश्रण गर्छन् जब तिनीहरूले यस्तो गबोर्ड बोर्डमा पाठ लेख्छन्। यस पछिका वयस्कहरू यस क्षेत्रमा राम्रो तरिकाले विकसित हुन्छन्।
8 फरवरी 2019 मा 12: 48
अमेजन वा इन्डोनेशियामा वर्षावनको बावजूद, हामी कणुलर पदार्थको बारेमा कुरा किन सुन्न सक्दैनौं? तपाईलाई थाहा छ कि चीजहरू मोटरसाइकल द्वारा उत्सर्जित हुन्छ र मान्छे सहित पर्यावरणलाई हानि दिन्छ। राम्रो को पाठ्यक्रम त्यहाँ शेल आदि को लबी पछि एक व्यापार मोडेल पहिले नै तिनीहरूले राजनैतिक एजेन्डा र छैन slavish मतदाता आफ्नो जिम्मेवारी भनिन्छ प्रतिनिधि दिनुहुने निर्धारण कि सिद्ध गरेको छ ... 😀
वायु प्रदूषणबाट सानो चुम्बकीय कणहरू मानव दिमागमा पाइन्छ र शोधकर्ताहरूले सोच्छन् कि तिनीहरू अल्जाइमरको बीमारीको सम्भावना हुन सक्छ।
8 फरवरी 2019 मा 20: 06
यो कारणहरूमध्ये एक वर्ष अघि सानो आर्थिक (सडक) कर मुक्त कारहरू बजारमा राखिएका थिए। सबै फिल्टर बनाइएका उत्सर्जनहरूको साथमा लैजिएको कणहरू सानो र अझ बढी मापनयोग्य। नतिजा एक क्लीनर एयर हो
यसको अतिरिक्त, विद्यालयमा कुनै पनि र मुख्य स्ट्रीम मिडिया देशमा (सरकार) बताउँछ कि यदि हामी सबैले अलेक्सिक्सको साथ आदेश गर्छौं भने हामी अप्रत्यक्ष रूपमा बाल श्रम र पर्यावरण प्रदूषणको लागि जिम्मेवार छौं। सबै अन्धकारले स्वच्छ हावाको बारे मा शिकायत गर्दा केही हप्ता बेला नेदरल्याण्ड्सका समुद्र तटहरूले मेरो सानो प्यानी र अन्य सस्तो बंकरको साथ हामीलाई भरिएको थियो।
वैसे, म उत्सुक हूँ कि यी सबै बच्चाहरुलाई लाइसेन्स र प्लेट्स दिइयो जब उनी नेदरल्यान्ड भन्दा माथि हावा मा सबै (chem) ट्रेल्स को बारे मा कुरा गरे।
8 फरवरी 2019 मा 20: 48
Chemtrails, मेरो विचार मा, एक बंदर कथा
8 फरवरी 2019 मा 21: 57
मैले यो लेख पढेको छु र तपाई के अर्थ बुझ्नुभयो। म यसलाई अजीब खोज्छु जुन हरेक हावा हावाका साथमा रहेका देशहरूमा (सबैले भनेका छनौट गरौं) सबै दिन झन्झन् नगर्ने। के यो गर्भनिरोधक वा चीमट्राइल छ कि छैन, यसले स्वस्थ छैन। जमे भएका कन्डेन्टेन्टले अझै पनि अपशिष्ट सामग्री समावेश गर्दछ जुन तपाइँको टाउको माथि निलम्बित रहन्छ र तल झर्छ।
मलाई यो पूर्णतया धारणा र महसुस लाग्छ। दिनभरि सुत्न थालेपछि मलाई सधै भावना थियो, केहि घन्ट भित्र पतली तहले देशमा लुट्यो। यो नीदरल्याण्ड छोडेको कारण थियो। यहाँ म विनाशहरू पनि देख्नुहुन्छ र तिनीहरू कहिलेकाँही त्यहाँ एक लामो समयसम्म बस्न चाहन्छन्, तर जहाजबाट फर्केर आउनुअघि, तपाईंले देख्नुहुन्छ कि ट्रेलहरू भंग हुन्छ।
व्यक्तिगत रूपमा, मलाई लाग्छ कि तिनीहरू यात्री विमान होइनन्, तर तिनीहरूबाट अलग-अलग व्यवस्थित भए। तपाईं पनि लेख्नुहोस् कि केहि व्यक्तिले एक थलो पैसाको लागि सबै कुरा गर्छ, यो के यी कार्यहरू पनिसँग सम्बन्धित छन्।
यो साँचो हो कि यो एक कठिन विषय हो र तपाईं एक निश्चित कुना मा थिचिएको छ, तर म जागृत छैन (र तपाईं पनि खुशी छैनौ)
9 फरवरी 2019 मा 10: 11
उडान रडार 24 मा तपाइँ कुन विमान आउँदै हुनुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ।
त्यसपछि तपाइँ सान्दर्भिक विमानमा क्लिक गर्नुहोस्।
तपाईं वैसे पनि फ्रान्समा बस्नुहुन्छ (यदि मलाई सही छ भने?) कुन क्षेत्र?
म बियरुलु सु डोर्डोग्ने नजिकैको पर्वतमा, कोरेजमा हुँ।
र chemtrails psy-op को सम्बन्ध मा, मैले पहिले नै लिङ्क / स्रोतहरू सहित व्याख्या गर्न खोजे। Adapt2030 र The Oppenheimer Ranch प्रोजेक्टले यस्तै निष्कर्षमा पुग्यो। सम्बन्धित परिवर्तन विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रहरूको साथ सौर चक्र (ग्रैंड सौर न्यूनतम) को कारण, समग्र क्लाउडको निर्माण अधिक हुन्छ। (क्लाउड न्यूक्क्लेशन) एउटै कारणको लागि, कन्डेन्सेशन स्ट्रिपहरू - सही मौसमको अवस्थाहरूमा - लामो समय देखिने दृश्यात्मक रहन्छ, वा भित्री बादल पनि देखिने देखिन्छ।
Geo ईन्जिनियरिङ् अवस्थित छ, क्लाउड एक्शनको बारे सोच्नुहोस्, तर त्यो सानो स्टोरेजमा छ।
र त्यो लामो समयसम्म चलेको कन्डेननेशन स्ट्रिपहरू मौसमलाई स्पष्ट रूपमा स्पष्ट छ।
जबसम्म माटो नमूनेहरूसँग संयुक्त वायु नमूनाहरू कुनै स्ट्रन्टियम, बेरियम, एल्युमीनियम र मनपर्दो देखाउँछन्, हामी "लामो निरन्तर ट्रेलहरू" को सबै भन्दा राम्रो कुरा गर्न सक्छौं। विमान धर्काहरू लामो वा ताजा (कम्तिमा अब प्रारम्भिक '80 भन्दा धेरै) कुहिरो गर्न क्लाउड तपाईं निश्चय साथ भन्न सक्छौं मात्र कुरा वास्तवमा छ हावा Linger। त्यसैले मलाई लाग्छ कि अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण धारणाओं से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले कि आप इसे जानते हैं कि आप मनोचिकित्सक तोते हैं। मैले एक तरिका मा "chemtrails" को रूप मा मुद्दाहरु को दृष्टिकोण को लागि डैडी जुडी काठ र एन्ड्रयू जॉनसन (चेकवेवाइड) देखि सीखा।
9 फरवरी 2019 मा 10: 50
रिकभरी, जहाँ मैले "विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र" लाई भनें म ब्रह्म विकिरण को मतलब।
भ्यालेन्टाइन जारोकोवा (आत्म एफएफ ग्लगलिङ) सूर्य चक्र विशेषज्ञ हो।
जहाँसम्म मैले निर्धारण गर्न सक्दिन, त्यहाँ कुनै पिन छैन।
9 फरवरी 2019 मा 19: 48
@ ClairVoyance म फ्रान्समा बस्न सक्दिन, तर अर्को छेउमा टाउकोमा समुद्र तट नजिक (मेरोलागि संसार वरपरको छ)।
अब कि तपाई उडान रडारमा सुरू गर्नुभयो, मेरो बारेमा कथा छ। म तीन वर्ष पहिले (एनएलमा) मेरो बगैंचामा बगैंचामा बसें र मेरो बुबा उनको ट्याब्लेटमा आफ्नो एपको साथ हेर्दै थिए। मैले भन्यो कि म हावा मा एक्स कारक को बेहोश थियो, म वास्तव मा एक्स को हरेक ठाँउ देख्छु। हामीले दुई विमानहरू आउँदै गरेको देखे र त्यो उस्तै उचाइमा उडिरहेका थिए। एक विनाश थियो कि छोटो समयमा हराएको थियो र अर्कोले एक ठूलो बाटो छोडेनन् जुन हराएको थिएन। मैले आफ्नो बुबालाई भन्यो कि त्यो विमान त्यो मोटी ट्रेलमा जान्छ? उनले भन्यो कि पागल छ, उनको कुनै उडान संख्या छैन र त्यो यसलाई प्राप्त गर्न केवल ट्याप गर्दै थियो। यसैले मलाई लाग्छ कि यो यात्री विमान होइन तर एपर्ट कार्यक्रम छैन। यसबाहेक, मलाई पनि थाहा छ कि पायलटहरू रिस हुन् कि तिनीहरू जिम्मेवार छन्, मेरो विचारमा उचित छ। म यस विषयमा मलाई विश्वास गर्नुपर्ने छाप दिन चाहँदैनन्। म ईमानदारीपूर्वक आशा गर्छु कि तपाईंको लिंकबाट वैज्ञानिकहरू सही छन्!
के म भन्न चाहन्छु कि हालको वर्षमा पृथ्वीमा अवस्था परिवर्तन भएको छ। अत्यन्तै धेरै व्यक्ति बिरामी छन् र म त्यो तर्कसंगत व्याख्या पत्ता लगाउन खोज्छु। म 100% मा विश्वस्त हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ कि यो हावाको गुण, खाना र जीवनको गुणस्तरसँग गर्न पर्छ। त्यहाँ केवल एक वैज्ञानिक वा आविष्कारक gezegt राम्रो छ म गम्भीर रूपमा लिने र निकोला Tesla भन्ने (Elon पर्छ एक dipstick को संग भ्रमित गर्न सकिन्छ)।
8 फरवरी 2019 मा 13: 08
म फेरि दोहोर्याउँछु। हामी नीदरल्याण्डमा शान्त, सूक्ष्म, तानाशाहमा बस्छौं। यो तानाशाही मा, अस्थायी, पक्राउ किनभने छैन र राजनीतिक dissidents, dissident रूपमा prosecuted को तानाशाही त परिष्कृत छ। साधारण मान्छे 'स्वैच्छिक' यो समूह, साथीहरूको दबाबको, काम को हानि, कुनै पेसा, आदि बहिष्कार गर्न सकिन्छ तपाईं सामान्य suspects को नीति, जो उनको विपरीत पालना छैन भने के। यो सँगी नागरिक नीति स्वेच्छाले, त्यसैले पनि प्ले भन्ने दिइएको, नागरिक प्रत्येक पालन भने गलत प्रभाव छ रूपमा परिष्कृत छ। यो परिष्कृत र शैतान छ कि यी कंडीशनिंग सामान्य शंकास्पदहरु लाई डराउँछन्। र साधारण lemmings को रूप मा साधारण मान्छे जारी।
नियमित परिवर्तन कृपया।
8 फरवरी 2019 मा 15: 42
मार्टिन, मेरो अन्तिम टिप्पणी दुई पटक हुन्छ र पोस्ट गरिएको छैन। पहिलो पटक, बाटोबाट ... 🙂
8 फरवरी 2019 मा 15: 47
एक तरिका मा तपाईं स्वचालित रूप देखि रद्दी रद्दी टोकरी मा केहि गर्न को बिना .. ध्यान दिनुहोस र यदि यो हुन्छ भने idd को संकेत दिनुहोस।
8 फरवरी 2019 मा 17: 54
मैले कुनै स्टाइल भिडियो देखेँ। येशू ख्रीष्ट, ती छोराछोरीहरू के मूर्ख छन्।
8 फरवरी 2019 मा 18: 14
"कोक्सिनम यससँग टाढा" ती बच्चाहरूले विश्वास गर्छन् कि CO2 प्रदूषण हो। omg।
8 फरवरी 2019 मा 19: 28
माफ गर्नुहोस्, ती बच्चाहरू बेवकूफ छैनन् तर जहर।
8 फरवरी 2019 मा 19: 23
कोर वाक्य हामी कसरी कम हुनुभयो:
ग्लोबल वार्मिङको लागि वैज्ञानिक प्रमाणहरू एक वैज्ञानिक एक पोडियम दिने र अन्य व्यक्तिलाई इस्तीफा दिने देवीलाई तान्न सकिन्छ।
सुश्री Minnesma (को climategate माथि लिंक मा चर्चा हेर्नुहोस्) पर्यावरण संगठन तलवण्डी साबो को गियाना CO2 वरिपरि सुरु angstmakerij र संगठन त डंडे पग्लियो कि 2030 हुनेछ झुक्काएका पनि हामीलाई राखिएको गर्ने एक अन्तर्राष्ट्रिय प्रबन्धकको रूपमा थियो जो देखि campaigner थियो कसरी डराउने तपाईं छोराछोरी बनाउन, लिंक तल आविष्कार फोर्ज द्वारा हेर्न चाहेको CO2 (चकमा) डर अब अनियन्त्रित उतेजना स्थान फेला पार्न
8 फरवरी 2019 मा 19: 52
म एक विलियम ह्यापर को भिडियो मा क्लिक गर्दछ, मार्टिन को सडक स्थल र म फेरि काटता हूँ,
सट्टा भन्दा बाहिर म्याट्रिक्समा फिर्ता सायद।
8 फरवरी 2019 मा 21: 22
आहा त्यहाँ एक यूरोपीय सब्सिडी पैसा हो कि एक प्रकारको युग जेग्डेन्डको निर्माण पछि ... "प्रायः" जलवायुको प्रदर्शन धेरै उत्साहजनक छैन, तर स्थापित
8 फरवरी 2019 मा 21: 32
ईयू र अधिक
यस विषयको बारेमा धेरै सार्थक एक लेख र साइट, अक्टोपस यसको ठाउँमा हरेक ठाउँ छ ...
संयुक्त राष्ट्र संघले 50 द्वारा 2010 मिलियन जलवायु शरणार्थीहरूको भविष्यवाणी गरेको छ, यो असफल भयो,
9 फरवरी 2019 मा 16: 01
यूनेस्को अक्सर साथ संभावित लक्ष्य भौतिक को ढेर बिक्री गरेर तथाकथित सुनामी अभ्यास वरिपरि धेरै संदिग्ध भूमिका निर्वाह, भेडा लुगा अर्को ब्वाँसो छ। यो समय हो कि मान्छे अब यिनी केन्द्रीकृत अन्तरराष्ट्रीय संगठनहरु को गंभीरता देखि नहीं ले र उनलाई बेवास्ता गर्छन
अनेसको "पुरुष र महिलाहरूको दिमागमा शान्तिको निर्माण" हाँ ठीक छ।
14.09.2018 - अन्तरराष्ट्रीय आंशिक भौगोलिक आयोग
115,000 व्यक्तिहरूले भारतीय महासागर चौधरी सुनामी व्यायाममा हटाउनुभयो
सुनामी व्यायाम भारतीय महासागर लहर 115,000 (IOWave2018) 18-4 सेप्टेम्बर5मा संचालित समयमा खाली भारतीय महासागर क्षेत्रमा एक रेकर्ड 2018 मान्छे। प्रयोगले भारतीय महासागर सुनामी चेतावनी प्रणाली र Mitigations (IOTWMS) को रूपमा यूनेस्को गरेको Intergovernmental Oceanographic आयोग (आईओसी) द्वारा समन्वित थियो। इरानको इस्लामिक गणतन्त्र को दक्षिणी तट बन्द एक 18 परिमाण भूकम्प र एक 9.0th 9.3th र सेप्टेम्बर मा उत्तरी सुमात्रा को पश्चिमी तट बन्द4परिमाण क्रमशः भूकम्प - व्यायाम IOWave5 दुई परिदृश्य enacting संलग्न।
9 फरवरी 2019 मा 16: 05
..और फेरि फेरि कार्यक्रम मा एक संख्या हो, तारीखहरु को लागि जब तपाईं 'प्राकृतिक आपदाओं' को रिपोर्ट गर्दा एक नजर राख्छ। संवेदीय वेनेजुएला को पिछवाडे मा, तर यो विशुद्ध रूप देखि संयोग हुनेछ ..
10 फरवरी 2019 मा 16: 00
रोचक लिंक सामन! एकछिन पछि उनीहरु एक अर्काको हातमा थियौ। एकछिन पछि एक अर्काको छेउमा बसिरहेको थियो।
12 फरवरी 2019 मा 01: 57
यो स्पष्ट थियो कि मान्छे ज्वार बदल्न सक्दैन 😀 पर्याप्त सामाग्री बेचेको छ
9 फरवरी 2019 मा 12: 02
Ventusky.com मा हामी धेरै राम्रो देख्न सक्छौं मौसम कसरी छ - हामी भन्नुहुन्छ क्यानाडा र उत्तर अमेरिका। उत्तरी अमेरिकामा सबै चिसो र बर्फको रेकर्ड तोडिएको छ। ओप्पेनहेमर रंच परियोजना अनुसार अनुमानित रूपमा। तिमी थाहा छ भने विशेष गरी N.America मा मौसम मा जारी हुनेछ, YouTuber का ठाउँ दैनिक नयाँ भिडियो बताए। ग्लोबल वार्मिंग र सौर चक्र पनि धेरै मनोरंजक पाहुना बारेमा झूटा रिपोर्ट बारे रोचक अंतर्दृष्टि बाहेक।
शिकागो एक हप्ता लामो 20 डिग्री "सामान्य" भन्दा चिसो मौसम छ भने हामी मिडिया को केही देख्न, तर यो "सामान्य" भन्दा अष्ट्रेलिया मा न्यानो दिन 1 डिग्री हुँदा त यो रिपोर्ट हुनुपर्छ।
मिडियाको छनौट अत्यधिक शीतकालीन चिसोलाई बेवास्ता गर्न पनि कोटिन्छ।
माइनस 20 त्यसपछि जाडोको जस्तो छ। र त्यहाँ ग्रीनल्याण्ड बरफ पिघल किनभने 10 भन्दा न्यानो डिग्री कि बारम्बार रिपोर्ट गरिएको छ "सामान्य।" (तर यति अझै पनि माइनस 12 डिग्री) तर protesting बच्चाहरु र आमाबाबुको यदि नै आंकडा सक्नुहुन्न मा तापमान उत्तरी ध्रुव 10 यो अझै पनि 12 वा, बरफ पगाल्न गर्छ जो छैन माइनस छ, "सामान्य" भन्दा न्यानो डिग्री।
(ध्रुवीय मा बर्फ स्थानीय उपसा ज्वालामुखी कारणले पिघ्न सक्छ।)
र ज्वालामुखी ग्राण्ड सौर न्यूनतम द्वारा अधिक सक्रिय हो, वास्तविक वैज्ञानिकहरूले देखाउँछन्।
9 फरवरी 2019 मा 16: 39
एक्सएनएनएक्सएक्स / एक्सएनएनएक्सएक्स को समयमा अष्ट्रेलिया उडान को सम्झना र उल्लेखनीय यू-बारी?
12 फरवरी 2019 मा 17: 52
म boublog को एक प्रशंसक होइन तर प्वाइन्ट Vereecke छुट्टिने अंकहरू रोचक छन्
जलवायुको लागि जग्गा तर करदाताले 😀
12 फरवरी 2019 मा 20: 52
यो लेख फेरि फेरि पढ्नुहोस् (नियन्त्रणमा रहेको) वैकल्पिक मिडिया (डबलिन) को विन्डोज (पीटर वर्रेक) को डबल तलमा बम कसरी बेइज्ज्वल रूपमा बेलाइयो?
12 फरवरी 2019 मा 21: 02
मैले पहिले नै पढेको लेख, कुनै पनि अवस्थामा एक (पूर्व) आधिकारिक सीक हो। मेयरलाई विश्वास गर्नुपर्दैन ..तपाईँको बिन्दुहरूको बारेमा सङ्कलन गरिएको छ, जानकारी लिनुहोस् कपाल मेरो मो
12 फरवरी 2019 मा 21: 10
म नियन्त्रित वैकल्पिक मिडिया र राजनीतिमा अभिनेताहरू बीचको अन्तरक्रिया देखाउन चिन्ता लाग्दछु र देखाउन चाहन्छु कि दुबै तलबाट बमले कसरी सहि सत्यलाई बेवास्ता गर्ने सही पङ्क्तिमा विस्फोट गरेको छ।
12 फरवरी 2019 मा 21: 13
एक पटक! राम्रो छ कि तपाई यसका बारेमा यहाँ राख्ने पाठकहरूको ठूलो भागको लागि यो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, यो एक माइफफील्डको लागि पर्याप्त सुरक्षा नेट ..
14 मार्च 2019 मा 11: 15
फायदा संग मार्चको साथ साथ हिड्ने, जस्तै दिन बन्द पनि कल्पना गर्न सकिँदैन (होइन), र त्यो शुद्ध दिमाग हो, हो हामी अहिले पनि त्यो जान्दछौं।
तर यो पनि खराब छ: यो हिंड्न "अनिवार्य" हो
सबै आमाबाबुले त्यो खुसी छैनन्। "यो समय राजनीतिक रूपमा निर्देशित छन् र स्कूलहरू यसको साथमा जान्छन्"
« किन लुसिफेरियनवाद, जादूगर र ट्राजीग्रेडिज्म मुख्य धारा हो
आरईएलएल को नकली विद्यार्थीहरु विन्सेन्डाल को बारे मा निइसेपुुर प्रोफेसर मीका डे शीतकालीन: असली अवतार एजेन्डा »
कुल भ्रमण: 13.966.223